ShweMinThar: July 2007
Build with Water!
မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIT) ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေက ရေလွှာ နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်လိုက်နိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။
Digital Water Pavilion လို့အမည် ပေးထားတဲ့ဒီအဆောက်အဦကို လာမယ့် 2008 ခုနှစ်စပိန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့် Expo Zaragoza 2008 မှာပွဲထုတ်ပြသမှာ ဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦအတွင်းပြခန်း၊ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနား နေနိုင်မယ့်နေရာတို့ပါရှိမယ်လို့ဆိုထားပါ တယ်။ အခုပြသမယ့် digital water ဟာ ကွန်ပျူတာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ inkjet printer လိုမျိုး မိမိအလိုရှိရာပုံရိပ်တွေ၊ စာသားတွေကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် ရေမှုန် ရေစက်တွေနဲ့အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း MIT ရဲ့ SENSEA-BLE City Laboratory ကအကြီးအကဲ Carlo Ratti ကရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီရေ ကန့်လန့်ကာ (water wall) အတွက် လေထဲမှာပိုက်တစ်ချောင်းချိတ်ဆွဲထားပြီး ပိုက်တလျှောက်ဆိုလီနွိုက်အဆို့ရှင် (Solenoid value) တွေတပ်ဆင်ထားကာ ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုသုံးပြီး အဆို့ရှင်တွေကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အ ခုလိုမျိုးရေမှုန်ရေစက်တွေကိုအရှိန်ပြင်းပြင်း နဲ့ကျဆင်းစေခြင်းဖြင့် ရေလွှာနဲ့နံရံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လိုအပ်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့စာသား တွေကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အဆို့ရှင်တွေ ကိုအဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါ တယ်။
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရေ ကို ဗိသုကာနယ်ပယ်မှာအသုံးချခဲ့ကြပြီး စက်မှုခေတ်အရောက်မှာတော့ရေကိုအလုံး အရင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးရေပန်းရေဖွားတွေအ ဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြကာ အခုနောက်ဆုံး ဒီဂျစ်တယ်အီလက်ထရောနစ်မှာကွန်ပျူ တာဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးမိမိတို့အလို ရှိရာပုံသဏ္ဍန်တွေရရှိအောင်ပြုလုပ်လာနိုင် ကြပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ရှိ MIT Design Laboratory ရဲ့အကြီးအကဲအ ဖြစ်တာဝန်ယူနေသူ ဗိသုကာ ဌာနမှူး ဟောင်း William.J.Mitchell ကပြော ကြားထားပါတယ်။ အခုပြသမယ့် Ware wall အတွင်းအာရုံခံကိရိယာတွေတပ် ဆင်ထားမှာဖြစ်ကာ တစ်စုံတစ်ယောက် ကအနီးအနားကိုချဉ်းကပ်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက်အလိုအလျေက်တစ်နေရာစာ ပွင့်ပြီး တံခါးတစ်ချပ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ပေး မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အခု ဒီဂျစ် တယ်ရေကန့်လန့်ကာရဲ့သဘောတရားကို MIT ရှိ Zaragoza Digital Mile သင်တန်းသားတွေက စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပြီး လာမယ့်2008့ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ပြသမယ့် Digital Water Pavilion ကို MIT ကသုတေသနပညာ ရှင်တွေနဲ့အတူ အီတလီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံတို့ကပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ပူးပေါင်း တည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရ ပါတယ်။
Take Care your GSM!
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများအခိုးခံရခြင်းများ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာယခုအခါဖုန်း ပျောက်ရှခြင်းမရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဖုန်းအတွင်းသို့ BB5 unlock အမည် ရှိဆော့ဖ်ဝဲထည့်သွင်း၍ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ““တကယ်လို့ဖုန်းအခိုးခံရပြီဆို ပါတော့။ အဲဒီ့ အခိုးခံရတဲ့ဖုန်းက SIM ကတ်ကိုထုတ်ပြီး တခြားကတ်ကိုထည့်လိုက် ရင် ဖုန်းမှာထည့်ထားတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲက စ အ လုပ်လုပ်ပြီးအသိပေးတာပါ။ ဥပမာ ကိုယ် က အိမ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆော့ဖ်ဝဲမှာထည့် သွင်းထားတယ်ဆိုရင် ကတ်လဲထည့်လိုက် တာနဲ့ အိမ်ဖုန်းမှာဖုန်းလာမြည်တော့တာ ပဲ။ ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဖုန်းမှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ်တဲ့ အိုင်ဒီတပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒီလို သိပြီဆိုရင် ကိုယ်က အဲဒီ့ဖုန်းနံပါတ်ကို လှမ်းဆက်သွယ်လိုက်ရုံပဲ၊အဲဒါဆိုရင်တစ် ဖက်ကလူကလည်း ဒီဟန်းဆက်ဟာ အခိုး ခံထားရတဲ့ ဟန်းဆက်မှန်းသိသွားမယ်””ဟု Mobile Fun Group မှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
““Nokia“ ဖုန်းတွေမှာအများဆုံးထည့်လို့ ရပါတယ်။ဟန်းဖုန်းသူခိုးတွေရဲ့ရန်ကနေ ကာကွယ်ပြီး ဖုန်းလုံခြုံရေးအတွက် အ ကောင်းဆုံးတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာပါ””ဟု ဆက်လက်ပြောပြသည်။
Posted by Alex Aung at 9:08 PM No comments:
Emo fashion is characterized as distinctly non-fashionable, keeping with the movement’s theme of showing little to no interest in all aspects of society. Emo individuals perceive themselves to be outcasts and dress accordingly so as to avoid any appearance of attempting conformity and falling short.
Girls tend to have short, dyed-black hair with the bangs cut straight across, usually done by the individual herself or byafriend, shunning the processed, rubber-stamped appearance of mainstream hairstyles. Jewelry, including facial and other body piercings, is quite common and is kept as natural as is possible - wooden and hemp accessories are extremely popular, and are, again, often homemade. Clothes follow suit, ranging from thrift store finds to handsewn skirts and shirts, often comprised of multiple fabrics combined into one article of clothing. Vintage articles are trendy for members of the emo subculture, including 1970s-style shoes and jackets.
Emotional-punk music evolved out of the punk movement spreading throughout the United States in the 1990s. Both emo and traditional punk music share the high energy level characteristic of punk and post-punk material.
Emo differs from traditional punk in that an extreme emphasis is placed on raw emotion, which is conveyed through heartbroken and sometimes angry lyrics and through emotionally-charged chord progressions and high-energy beats. The music is designed to be highly dramatic, taking the listener throughaseries of powerful ups and downs with constant lyrical reminders of the heartbreak and pain the music is meant to reflect. Harmony is used more so in emo than in punk music, particularly to accent certain words and concepts, and emo music on the whole tends to emphasize melody and lyricism, certainly more so than does traditional punk music, which is designed to anger and move to action rather than depress or emphasize vulnerability.
Perhaps the most distinct difference between emo and traditional punk music is the former’s repeated use of loud-soft contrasts, reflective of the singer’s mood changes between heartbreak, anger and confusion. Before emo, almost all punk music heldasteady volume perpetuated by rhythm guitar. Emo often cuts the rhythm guitar suddenly, opting foramore intimate organ, bells or other softer, more contemplation-provoking type of sound.
ပေါင်းထား (သို့) ပြုတ်ထားသော ၀က်သား - ၁ခွက်ခွဲစာခန့် (ပါးပါးလှီးထားပါ။)
ပေါင်းထား(သို့) ပြုတ်ထားသော ကြက်သား - ၁ခွက်ခွဲစာခန့် (ပါးပါးလှီးထားပါ။)
ပေါင်းထား(သို့) ပြုတ်ထားသောပုဇွန် - ၁ခွက်ခွဲစာခန့် (ပါးပါးလှီးထားပါ။)
ငရုတ်သီးအနှစ် - စားပွဲတင်ဇွန်း (၃) ဇွန်း
သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်း
ငါးငံပြာရည် - စားပွဲတင်ဇွန်း (၃) ဇွန်း
သံပုရာရည် - ခွက် ၄ပုံ ၁ပုံခန့်
မန်ကျည်းမှည့်ရည် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း၊ ၃ဇွန်းခန့်
- ငရုတ်သီးအနှစ်၊ ငံပြာရည်၊ သကြားနှင့် မန်ကျီးမှင်္ည့ရည်များကို အိုးထဲထည့်ပါ။ မီးနွေးနွေးဖြင့် အပူပေးပြီး ဆူလာသည်အထိ မွှေပေးပါ။ မီးဖိုပေါ်မှ ချပြီး အနည်းငယ်အေးသွားအောင်ထားပါ။ ပြီးလျှင်သံပုရာရည်လောင်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။
- အချဉ်ရည်ကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲသို့ ပြောင်းထည့်ပါ။ ၀က်သား၊ကြက်သားနှင့် ပုဇွန်များထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပါ။
- စားမည့် ပန်းကန်ထဲတွင် ဆလပ်ရွက်ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့် ဥနီများခင်းပါ။ သုတ်ထားသော အသုပ်ကိုထည့်ပါ။ စားခါနီးမှ ထောင်းထားသော မြေပဲအနည်းငယ်ဖြူးထည့်ပေးပါ။
Emo Fashion Emo fashion is characterized as distin...